Naya Bikalpa | यो सरकारले संवैधानिक कानुनहरु सबै मिचेर एकलौटी ढंगले अगाडि बढेको छ - Naya Bikalpa यो सरकारले संवैधानिक कानुनहरु सबै मिचेर एकलौटी ढंगले अगाडि बढेको छ - Naya Bikalpa
प्रकाशित मिती: २०७७ मंसिर ८, १२: २६: ०२
जनताको आवाज बुलन्द गर्ने थलो संसद बन्द भएको वर्षदिन हुनलागिसक्यो, सुचारु गर्न नेपाली कांग्रेसले पहल गर्नुपर्दैन ?
नेपाली कांग्रेसले अबरुद्ध संसद सुचारु हुनुपर्छ भनेर पहल गरिरहेको छ । तर, यसलाई दबाब दिनको लागि कम्तिमा प्रतिपक्षसँग २५ प्रतिशत सांसद संख्या चाहिन्छ ।
नेपाली कांग्रेससँग मात्रै त्यो तागत छैन । त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले मात्रै पहल गरेर संसद खुलाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । तर, जनताको आवाज बुलन्द गर्ने एउटै मात्र थलो संसद हो ।
यसलाई खुलाउनको लागि नेपाली कांग्रेसले हरतरहले प्रयास गरिरहेको छ । गत भदौ, असोजमै चल्नुपर्ने संसद सरकारमा बस्नेहरुबाटै विरोध भयो । यो सरकार जनतालाई समस्या समाधान गर्नेतिर भन्दा पनि भ्रष्टाचार र अनियमिततातिर लिप्त भयो ।
कुनै छलफलबिना हठात रुपमा संसद् बन्द गरेर कमाउ धन्दातिर लाग्यो । त्यसकारण यो सरकार जनउत्तरदायी नभई एकदलीय तानाशाहीतिर उन्मुख भएको छ ।
सरकारमा बस्नेहरुले त आफ्ना कमीकमजोरीहरु उजागर हुन्छन् भनेर नखोल्लान, नेपाली कांग्रेस पनि तमासे भएर बस्यो नि ?
नेपाली कांग्रेस जस्तो जिम्मेवार पार्टीले अहिलेको अवस्थामा सकडमा नारा जुलुस गर्न उचित भएन । जनताका आवाज मुखरित गर्ने थलो संसद हो, त्यो ताल्चा लगाएर राखिएको छ ।
अब भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा हामीले भन्नै परेन । उहाँहरुकै पार्टीका प्रतिनिधिहरुले भन्नु भएको छ । हामीले उठाउनुपर्ने कुराहरु हरेक जनताका घरदैलोमा, सञ्चारमाध्यम मार्फत् भनिराखेका छौं ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पटक–पटक भ्रष्टाचार भयो, मुलुक डुब्यो भनिरहनुभएको छ । प्रतिपक्षको हिसावले हामीले पहिला हाउस चल्दादेखि नै भन्दै आएको हो ।
अहिले उहाँहरुकै पार्टीका जिम्मेवारी नेताहरुले भनिरहनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसले जति पहल गर्दा पनि संसद खुलाउन सकिएको छैन । तर, विभिन्न सञ्चारमाध्यम मार्फत सरकारले गरेका अनियमितताका कुराहरु जनता सामु पु¥याउने काम हामीले गरिराखेका छौं ।
त्यसको साथै नेपाली कांग्रेस छिटोभन्दा छिटो संसद खुलाएर जनताका आवाज मुखरित हुनुपर्छ भनेर सकेसम्म प्रयास गरिरहेको छ । सकेसम्म छिट्टै संसद खुलाउने र त्यहाँ सरकारले गरेका अनियमितताको भन्डाफोर गर्ने ।
यदि त्यो हुन सकेन भने विभिन्न सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्चाल, पत्रपत्रिका लगायतको माध्यमबाट पनि सरकारले गरेको भ्रष्टाचारको नेपाली कांग्रेसले भन्डाफोर गर्छ ।
कोरोना नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्य सामाग्री खरिद लगायत सरकारका विभिन्न क्रियाकलापमा भ्रष्टाचारका कुरा छताछुल्ला भए, त्यसमा नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा आएन नि ?
त्यसमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट धारणा छ । चाहे त्यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस दरिद प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसले नै आवाज उठाएको हो । त्यो काण्डमा ७० करोड भ्रष्टाचार गरेको कारणले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएको अवस्था छ ।
त्यसमा अडियो मात्रै होइन, भिडियो नै छ भन्नेहरु पनि छन् । त्यसकारण यो सरकार बनेकै भ्रष्टाचार गरेर देशलाई भड्खालोमा हाल्न लागेको हो भन्ने कुरा ३ करोड नेपाली जनताको घरदैलोमा पुगिसकेको छ । त्यसका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस जनताको साथ लिएर अगाडि बढ्छ ।
दशैं, तिहार र छठ पर्वका कारण रोकिएको क्रियाकलाप लिएर सदनदेखि सकडसम्म जनताका आवाज बुलन्द बनाउँदै नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ्छ ।
विश्वमा कोरोनाको परीक्षण सरकारले गरिरहेको बेलामा नेपालमा एकाएक पैसा तिनुपर्ने बनाइयो, त्यसमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पनि स्पष्ट धारणा आएन भन्ने गुनासो छ नि ?
हामीले संविधानमै स्वास्थ्य जनताको नैसर्गिक अधिकार हो भनेर संविधानमा लेखिएको छ । फेरि विश्वले महामारीको रुपमा लिएको कोरोनाको परीक्षणमा कहिले पीसीआरको पैसा तिर, कहिले न तिर भनेर यो सरकार नागरिकप्रति अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र असम्वेदनशील भएको छ ।
कोभिड–१९ कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्छ । अहिले जसरी सरकारले यो रोगलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएको छ । त्यसलाई नेपाली कांग्रेस जनताको नैसर्गिक अधिकार विरुद्धको कदम भनेर विरोध गरेको छ ।
सरकारले जसरी प्राइभेट अस्पतालिहरुमा कोरोना परीक्षण गराएर पैसा असुल्ने, सरकारीमा परीक्षण पीसीआर परीक्षणको पैसा लिने गरेको छ । त्यसको नेपाली कांग्रेस विरोध गरेको छ । यसलाई कार्यक्रम बनाएर हामी अगाडि बढ्ने छौं ।
तिनै नागरिकहरुलाई पहिला निःशुल्क परीक्षण गर्ने अनि पछि आएर पैसा तिराउने गर्दा त भेदाभव देखियो नि ?
त्यसै हुनाले यो सरकार नागरिकहरुप्रति सम्वेदनशील र जवाफदेही छैन । नेकपालाई यो सरकार ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ जस्तो भएको छ ।
हिजो जसरी कम्युनिस्टहरु एक भएर झन्डै दुई तिहाई हाराहारी मत ल्याए । त्यसको अहिले पूर्ण रुपले दुरुपयोग भइरहेको छ । यो नागरिकको सरकार नै होइन । नेपाली जनताले सरकार छ भनेर महसुस पनि गरेका छैनन् । सीमित कार्यकर्ताको पालनपोषण गर्ने काम मात्रै यो सरकारले गरेको छ ।
त्यसोभए नेकपाको सरकारले ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ जस्तो उखान चरीतार्थ गरेको हो ?
जुन रुपले जनादेश प्राप्त भयो । त्यो उनीहरुको लागि ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ भयो । जनादेशको आडमा भ्रष्टाचार गर्ने र मुलुक रित्याउनेबाहेक जनताको सुख, सुविधाको काम भएन ।
नागरिकको नैसर्गिक अधिकारभित्र परेको स्वास्थ्य परीक्षणमा पनि कसैलाई पैसा तिराउने, कसैलाई सित्तैमा परीक्षण गर्ने कामले सरकार जनताप्रति पुरै अनुत्तरदायी बनेको छ । यो रवैयाले सरकार जनता अगाडि पूर्ण रुपले नांगो भएको छ । मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति जनताले गरेका छैनन् ।
कोरोना परीक्षण र उपचार राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर हो ?
हो, विश्वले महामारीको रुपमा लिएको कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क रुपमा राज्यले गर्नुपर्छ । यो राज्यको दायित्वभित्र पर्ने काम हो । राज्यले गर्न नसक्नु यो सरकारको नालायकीपन हो । जनता सामु सरकार पूर्ण रुपले नांगिएको अवस्था हो ।
कोरोना नियन्त्रण र उपचार गर्ने काम राज्यको हो । कसैलाई पैसा लिने कसैलाई निःशुल्क गर्ने होइन । सबैलाई समान रुपमा परीक्षण र उपचार हुनुपर्छ । त्यो जनताको अधिकारभित्र पर्ने कुरा हो । निःशुल्क उपचार हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छौं । यो अनुभवहिन सरकार कुनै हालतमा पनि जनउत्तरदायी छैन ।
त्यसोभए अहिले सरकार बस्नेहरुमा राज्य सञ्चालन गर्ने क्षमता छैन भन्न खोज्नु भएको हो ?
हो, उनीहरुमा सरकार सञ्चालन गर्ने र विपत्तीको सामना गर्ने क्षमता छैन । अहिले ८ महिनादेखि भएको लकडाउनको बेलामा उनीहरु व्यवहार र कामले छर्लङ्ग भएको छ । यो अवधिमा उनीहरु खाली कसलाई मन्त्री बनाउने, कहाँ आफ्नो मान्छ राख्ने, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसलाई नियुक्ति गर्ने ध्याउन्नामा लिप्त छन् । जनताका समस्याप्रति रत्तिभर ध्यान दिएको पाइँदैन ।
सरकारको अनियमिततामा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको पनि मिलेमतो छ भन्ने आरोप छनि ?
झण्डै दुई तिहाई हाराहारी मत प्राप्त गरेर सरकार बनिसकेपछि हामीसँग सरकार गिराउने र बनाउने तागत भएन । फेरि नेपाली कांग्रेस एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षी भएकाले त्यस्तो खेलमा लाग्दैन । सरकारले गरेका गलत कामहरु जस्तै सुन काण्डका कुरा हुन्, वाइडवडीका कुरा हुन्, चाहे यति प्रकरणका कुरा हुन्, चाहे सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रस खरिदका कुरा हुन् ।
कतिपय काण्डमा अख्तियारले कारबाही गर भन्दा कानमा तेल हालेर बसेको देख्दा संवैधानिक निकायलाई नै प्रभावमा पारेको देखिन्छ । उतातिर स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्दा ओम्नी कम्पनीलाई २ रुपैयाँको चिजलाई १० रुपैयाँसम्म भुक्तानी गरिएको छ । १० रुपैयाँको चिजलाई ४० रुपैयाँसम्म भुक्तानी गरिएको छ । यी सबै क्रियाकलापलाई हेर्दा सरकारले आफूले हिजो पाएको जनमतलाई लत्याएको छ ।
जनताको सेवक होइन, आफू मालिक भएर उनीहरुलाई नोकर बनाएको छ । हिजो नेकपालाई भोट हाल्ने नागरिकहरु अहिले थकथक मानेर बसेको अवस्था छ । यो हामीले मात्रै भनेको होइन । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्षले नै लिखित रुपमा पटक–पटक भनेका छन्, ‘यो सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त छ, मुलुक टाटपल्टिन लाग्यो, मुलुक जनताप्रति जवाफदेही भएन’ भनेर ।
फेरि कम्युनिष्टलाई सत्तामा पु¥याउनु भनेको देशलाई कंगाल बनाउनु हो ?
त्यसमा त शंकै छैन, आमजनताले अहिले त्यही भनिरहेका छन् । जनताले २०६४ सालमा मुलुकमा नयाँ परिवर्तन ल्याउँछ भनेर तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई जनमत दिए, उसले एउटा संविधान बनाउन सकेन ।
चार–चार जना प्रधानमन्त्री फेरिँदा पनि दुईभित्र संविधान बनाउछु भनेर चार वर्ष बित्दा पनि संविधान बनाउन सकेनन् । नेपाली कांग्रेसले २०७० सालको चुनावमा भन्यो, ‘एक पटक हामीलाई जनमत दिएर ठूलो पार्टी बनाउन दिनुहोस्, हामी संविधान पनि बनाउछौं, मुलुकमा स्थायी शान्ति पनि बहाली गछौं’ भन्यो ।
त्यसो भनेर चार वर्षको अवधिको लागि चुनाव भएको थियो । तर हामीले दुई वर्षमै संविधान पनि जारी ग¥र्यौ, मुलुक स्थायी शान्ति पनि बहाली गरेर छाड्यौं । त्यसकारण जब यो मुलुकमा संकट पर्दछ त्यतिबेला नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसलाई सम्झिन्छन् । अहिले पनि जनताले त्यो कुरा महसुस गरिसकेका छन् । त्यो भयो भन्दैमा अहिले यो सरकार ढाल्ने नेपाली कांग्रससँग तागत पनि छैन ।
सरकार ढाल्ने फेरबदल गर्ने तागत पनि छैन, कांग्रेसको त्यो नियत पनि होइन हो ?
नेपाली कांग्रेस एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी हो । त्यसैले जनमतको कदर गर्छ । यसले जनताको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न सक्नुपर्छ । यो सरकार पाँच वर्षसम्म यो चल्नुपर्छ । अनि आम चुनावमा जानुपर्छ । हामीले राम्रो काम गरेर जनतालाई देखाउनुपर्छ । यो नै प्रजातन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष हो । एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षले गर्ने काम पनि त्यहीं नै हो । सरकारले गलत काम सदनदेखि सकडसम्म हामीले राखेका छौं ।
सरकार एकातिर कलेजको जाँच गर्ने अर्कोतिर नगरप्रमुखहरुलाई उचालेर लकडाउनको कुरा गर्ने द्वैत चरित्र भएन ?
यो सरकार कुनै भिजन छैन । पूर्ण रुपले असफल भइसकेको छ । ऊसँग राज्य सञ्चालन गर्ने कुनै क्षमता छैन । राज्यसत्ता कसरी चल्नुपर्छ, कानुनी राज्य कसरी चल्नुपर्छ ? संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरु लागु भए कि भएनन् भन्नेतिर ध्यान दिएको छैन । यो सरकारले संवैधानिक कानुनहरु सबै मिचेर एकलौटी ढंगले अगाडि बढेको छ । नियमसंगत ढंगले काम गरेको छैन र गर्ने क्षमता पनि राख्दैन ।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन पनि आयो, तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन्छ ?
नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशन गर्नैपर्छ । महाधिवेशन बिनाको प्रजातान्त्रिक पार्टी हुनै सक्दैन । अहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिडको कारणले चार वर्षे अवधि समाप्त भएर पाँच वर्षमा रनिङ गर्दै छौं । त्यो अवधि पनि आगामी फागुनमा सकिँदैछ ।
त्यसपछि जटिल परिस्थिति भएमा अर्को छ महिना थप्न पाइने भन्ने छ । त्यो अवधिभित्र हामीले कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्योभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेनौं भने हामी प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेर रहन सक्दैनौं । त्यसकारण अन्तिम भदौसम्म नेपाली कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गर्छ ।
केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला स्थानीय र गाउँतहसम्म महाधिवेशन तयारीका क्रियाकलापहरु भइराखेका छन् ?
नेपाली कांग्रेसले सबै तहमा आफ्नो क्रियाकलापलाई चुस्तदुरुस्त बनाएको छ । नेपाली कांग्रेसले जहाँ–जहाँ नेतृत्व गरेको छ, त्यहाँ विकास निर्माणदेखि पार्टीको कामलाई सुचारु ढंगले अगाडि बढाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै चार ठाउँमा हाम्रो स्थानीय सरकार छ ।
त्यो चाहे दक्षिणकाली होस्, चन्द्रागिरी, नागार्जुन र गोकर्णेश्वर होस् ती ठाउँहरुमा नेपाली कांग्रेस जनताको पक्षमा उपलब्ध साधनस्रोत र आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म काम गरेको छ । त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले अहोरात्र खटेर राम्रो काम गर्नुभएको छ ।
अब आउने आमचुनावमा बहुमत ल्याउने गरी नेपाली कांग्रेस काम गरेको छ त ?
नेपाली कांग्रेस आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म जनताको पक्षमा राम्रो काम गरेको छ । र, जनता अहिले अत्तालिएका छन्, ‘कस्तो समयमा कम्युनिस्टलाई भोट दिएछौं’ भनेर ।
कम्युनिस्टका मीठो नारामा भुलेर भोट दिएकोमा आमनागरिकहरु अहिले पछुताइरहेको अवस्था छ । त्यसैले पनि आगामी आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको बहुमत पक्का छ । यो नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकताभित्रको कुरा हो ।
अन्त्यमा केन्द्रविन्दुमा रहेको लोकप्रिय पत्रिका नयाँ विकल्प साप्ताहिक मार्फत् मेरा विचारहरु प्रवाह गर्ने अवसर दिनुभएकोमा पत्रिका परिवारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
२०७७ मंसिर ८, १२: २६: ०२